पहिले भिआइपी व्यवसायी अहिले वसन्तपुरका “चिया–मामा” | SouryaOnline
पहिले भिआइपी व्यवसायी अहिले वसन्तपुरका “चिया–मामा”
सौर्य अनलाइन २०६९ चैत ६ गते २:३५ मा प्रकाशित
वसन्तपुर, नेपालको ऐतिहासिक अनि पर्यटकीय सानको केन्द्र । इतिहासलाई उथलपुथल पार्ने कोतपर्व यसैको काखमा भयो । ०७ सालयता बौद्धिक जमघटको थलो पनि भयो, वसन्तपुर । धेरै साहित्यकारले आफ्ना कृतिमा न्युरोड–वसन्तपुरको अध्ययन संस्कारबारे उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला नेपालका चर्चित साहित्यकारहरूको साहित्यिक विमर्शको गतिलो थलो यही थियो । वसन्तपुरको बाहिरी मुहार अहिले पनि लगभग उस्तै छ तर फेरिएको छ वातावरण ।
वसन्तपुर डबलीछेउछाउका दृश्य फेरिएका छन् । भीडभाड लगभग उस्तै होला तर विगतभन्दा भिन्न प्रकृतिका पात्रहरूले भरिन्छ यहाँको सेरोफेरो । राजनीतिक दलका विरोध अनि समर्थनका सभाले वातावरण तताइरहेका भेटिन्छन् । आइतबार दिउँसो वसन्तपुर डबलीमा राप्रपा नेपालले आमसभा गरिरहेको थियो । विदेशी पर्यटकहरू पुरातात्विक संरचनातिर क्यामेरा ताक्दै यताउति हिँडिरहेका देखिन्थे । प्रेमजोडीहरू भीडलाई बिर्सिएर आफ्नैखाले रोमान्समा डुबिरहेका भेटिए ।
नशामा झ्याप भएर हिँडेका ट्यापे–मुन्द्रे हुन् वा भौँतारिइरहेका सडकबालक । सबैको टहलिने ठाउँ बनेको छ वसन्तपुर ।
वसन्तपुरको सानो क्षेत्रमा देखिने यी क्रियाकलापले नेपालको आधुनिक वदलाब बुझ्न काफी छ । चियाकफीका साथ हुने बौद्धिक विमर्शलाई अहिले प्रेमालापले विस्थापित गरेको छ । यद्यपि, कुम जोडेर आडमा बसेको अपरिचित थाहा नपाएभैँm गरिरहन्छ, मानौँ– आँखै अगाडिका ती घटनाबाट ऊ बेखबर छ । इतिहासका महत्त्वकारी घटनाहरूको गर्भस्थल वसन्तपुरको बदलाव १७ वर्षयता लगातार नियालिरहेछन् गोपाल आचार्य उर्फ मामा । यतिबेला वसन्तपुरमा कुनै साहित्यिक जमघट छैन र त्यसमा भूपी शेरचन, शंकर लामिछाने, गोपालप्रसाद रिमाललगायतको बौद्धिक स्पर्धा पनि छैन । त्यो ठाउँ वयष्कहरूको डेटिङ स्पटमा बदलिएको छ । उनीहरूलाई गोपाल मामा चिया खुवाउँदै छन्, प्रतिकप १२ रुपियाँमा ।
बिहान साढे ५ बजे पुग्दा ६५ वर्षका ‘चिया मामा’ जसरी बसिरहेका हुन्छन्, साँझ पाँच बजे पुग्दा पनि उही स्फूर्ति देखिन्छ । स्वभाव भने कडा मिजासको प्रस्तुत गरिरहन्छन्, बेलाबेला । व्यापारी भएर पनि तपाईं कस्तो कडा मिजासको ? उनको जवाफमा आधुनिक सामाजिक चरित्रको विम्ब भेटियो, जसको भुक्तभोगी हुन् चियामामा– ‘यो ठाउँमा कस्ताकस्ता मान्छे आइपुग्छन् भने नि उनीहरूलाई राम्रो मुखले भनेकै पच्दैन । पहिला पैसा तिरेर चिया माग्नुपर्नेमा परैबाट सुइय सिठी बजाउँछन् अनि तीन औँला ठड्याउँदै इसारा पो गर्छन् । त्यस्तालाई ओइ, साला… भनेर थर्काए मात्र खुरुक्क आएर पैसा तिर्छन् अनि चिया लिएर जान्छन् । अरूको प्रवृत्ति नै त्यस्तै भएपछि आफू मात्र नरम भएर काम लाग्यो त ?’ वसन्तपुरको फेरिएको चरित्र र आफ्नो बाध्यताबारे बोल्दा बाटुला, राता अनि ठूला आँखा अझ ठूला बनाउँदै थिए उनी ।
वसन्तपुर क्षेत्रमा पुग्ने अधिकांश चिया–अम्मलीहरूलाई उनको हातको स्वाद थाहा छ । ‘आधुनिक चियामामा’ गोपाल वसन्तपुरको डबली क्षेत्रमा टहलिन चाहनेलाई चियाको तलतल मेटाउन तयार हुन्छन् हरबखत । सबैको लागि उत्तिकै अर्थात १२ रुपियाँको दूरी ‘मेन्टेन’ गरेका छन् । ‘ह्याँ पाक्ने चिया एउटै क्वालिटीको हुन्छ, त्यसैले दर पनि एउटै । अनि पैसाचाहिँ प्रिपेड भुक्तानी गर्नुपर्छ । ४० हजार रुपियाँ उधारो चियामा डुबेको छ मेरो । त्यसैले दुई वर्षयता प्रिपेड चुक्ताको व्यवस्था गरिएको हो’, दर र प्रिपेड व्यवस्थाबारे उनको टिप्पणी ।
– ए मामा लौ दुईकप चिया दिनुस् ।
– २४ रुपियाँ पैसा तिरेर जानुस्, चिया त्यहीँ आइपुग्छ ।
पैसा तिरिसकेपछि ‘भान्जाभान्जी’ लाई फुरुंग बनाउन पनि जानेका छन् मामाले । उनलाई समयले सिकाएको हो यो तरिका । भन्छन्, ‘ल ह्यान्डसम भाइ/ल ब्युटिफुल बहिनी, चिया एकैछिनमा आइहाल्छ ।’
वसन्तपुर डबलीको छेउमै रहेको पुरानो शैलीको घर । दुईवटा ढोकामाथि निलो रंगले लेखिएको छ, ‘मामाको चियापसल’ । चिया पिउने ग्राहकलाई कुर्सी र बेन्चको व्यवस्था छैन । वसन्तपुरकै छेउछाउ खुला ठाउँमा बसेर चिया पिउँछन् उनका ग्राहक । एकजना थप मान्छे भित्र छिरे भने मामालाई चिया छान्ने ठाउँ पनि नपुग्ने साँघुरो कोठा छ । होचो मुढामा ढोकापट्टी फर्किएर बस्छन्, गोपाल आचार्य । दुईवटा ताप्के, चिया पकाउने भाँडो । मिल्क र ब्ल्याक टी छुट्टाछुट्टै बनाउन रेडी छन् । दिनभरमा एकपटक पनि ग्यास चुल्हो निभेको देखिँदैन । सानो बाल्टीमा भरी चिनी र चियापत्ती मुठीका दरले थपिरहन्छन्, कित्लीबाट दूध ।
काठमाडौं, मच्छेगाउँका स्थायी बासिन्दा हुन् गोपाल । बाल्यकालमै बुबासँगै कलकत्ता गए । उतै पढे । उनका अनुसार कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट वाणिज्यशास्त्रमा ग्य्राजुयसन सके । ऊ बेला यत्तिका पढेका मान्छे कसरी चिया पसले बन्न आइपुगे त ? बाहिर देखिने रूपले उनको जीवन कहानी खोल्न सक्दैन । जीवनमा विभिन्न संघर्ष भोग्दै, हन्डर खेप्दै फुटपाथको चियापसले हुँदै अहिले सानो दुकानसम्म आइपुगेको लामो कथा रहेछ उनको ।
‘आफ्नो भागमा भएभन्दा बढी कसैले पाउँदैन’, अहिलेसम्मको लामो जीवन कहानीलाई यत्तिमै सक्ने कोसिस गर्दै थिए उनी । अहिलेको जीवनबाट दु:खी हुनुहुन्छ र ? उनको निष्कर्षलाई लम्ब्याउने कोसिसपछि बल्ल विगतबारे खुले गोपाल, ‘वास्तवमा कलकत्तामै मलाई राम्रो थियो । पैसा कमाएको थिएँ । स्टान्डर्ड होटल थियो । मान्छेले साहुजी भनेर सम्मान गर्थे । बिहे गरेको थिएँ । पत्नी, छोरी थिइन् । तर, मसँग जीवनको पूर्णता थिएन । नेपाली भनेर गौरवसाथ काम गर्न सक्दिनथेँ त्यो विदेशी भूमिमा ।’ अर्कोतर्फ आफ्नै महत्त्वकांक्षाले पनि तान्यो उनलाई । वंशको नाममा छोरामोहले भरिएका थिए उनी । ‘एउटी छोरी जन्मिएपछि पत्नी अर्को सन्तान जन्माउन नसक्ने भइन् । धनले खुसी दिन नसक्ने रहेछ । खुसी खोज्दै थातथलो फर्किएँ । नेपाल आएपछि जेठी श्रीमतीको स्वीकृति लिएर अर्को बिहे पनि गरेँ । कलकत्तामा कमाएको धन लगानी गरेर व्यवसाय थालेँ । ठमेलमा ठूलो होलसेल पसल खोलेँ, पाटर्नरसिपमा । तर, पार्टनर अगतिलो परे, व्यवसाय डुब्यो । मसँग हातमा एक कौडी पैसा भएन । अंशवापत भागमा परेको जग्गा पनि दाजुभाइले नदिएर मुद्दामा अल्झिनुपर्‍यो ।’ लगानी गर्न हातमा पैसा थिएन गोपालसँग त्यति बेला । परिवार पनि पाल्नुपर्ने थियो । ठूलो लगानी डुबेपछि उनी फुटपाथमा भविष्य खोज्ने टुंगोमा पुगे । फुटपाथको जीवन रोजेको दिन सम्झिँदै छन् गोपाल, ‘केही दिनअघिसम्म ठमेलको भिआइपी व्यवसायी म बिहानै ५ बजे स्टोभ बोकेर वसन्तपुरको खुला आकाशमुनि सडकमा चिया बेच्न लागिरहेको थिएँ । सपना हो कि जस्तो लाग्यो आपैँmलाई । स्टोभमा दम दिँदै ‘लौ हजुर चिया खानुुस्’ भन्नै सकिनँ ।’ आत्मसम्मानले पोलेको त्यो बेला भान्जाबाट सहयोग लिएछन्– ‘भान्जा मसँगै बसेर पढ्दै थिए । केही समय उनलाई अगाडि राखेँ । मचाहिँ जुटाउने कुराहरूमा ध्यान दिन थालेँ ।’ विस्तारै उनीभित्रको आत्मसम्मानबोधको पीडा कम हुन थाल्यो । धक हट्न थाल्यो । अथवा, उनलाई लाग्न थाल्यो– काम जस्तोसुकै भए पनि परिश्रम गरेर खाँदा आत्मसम्मान कहिल्यै घट्दैन । ‘विस्तारै आपैँm फ्रन्टमा आउन थालेँ, त्यसपछि प्रचारमा आयो, मामाको चियापसल ।’
उनको बुझाइमा ‘स्ट्रिट बिजनेस भए पनि क्वालिटी मेजर हुन्छ ।’ भन्छन्, ‘क्वालिटी भएको मान्छेले गोलभेँडा बेचे पनि सफल हुन्छ । आखिर क्वालिटीचाहिँ केमा हुन्छ त ? अंग्रेजीमा छाँटे– ‘क्वालिटी इज इन एडुकेसन ।’ उनको तर्क उपभोक्तावादलाई आफ्नै शैलीमा प्रस्ट्याउँदै अझ दह्रोसँग आयो– ‘म पनि पढेको मान्छे, व्यवसायमा असफल भएपछि स्कुल–कलेज पढाउन जान सक्थेँ । तर, गइनँ । कलेज पढाउने धेरै प्रोफेसर मेरा साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग सम्मान छ तर २० हजार रुपियाँ पैसाले कसरी जीवन चलाउन सकिन्छ । म पनि सम्मान खोज्दै गएको भए त्यही हालत हुन्थ्यो । फुटपाथे चिया पसले बनेँ, सडकमा बसेर स्ट्रिट क्वालिटीका मान्छेलाई चिया बेचेँ । पाँच वर्षपछि सडकको चियादोकान भाडाको कोठामा सारेको छु । बीस हजार रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्छ । दुई छोराछोरी पढाउन समस्या छैन । एक जना मान्छे आउँदा चिया खुवाउन हात थाप्न जानु पर्दैन । मेरो जीवन योभन्दा खुसी के हुनसक्छ ।’
जीवनको भोगाइ बताइरहँदा पनि व्यस्त नै छन्, गोपाल आचार्य । उनले यो बीचमा उमालेको चियाका लागि कच्चा पदार्थ, चिनी दुई बाल्टिन सकाइसकेका छन् । पत्नीलाई अर्को बाल्टिन चिनी ल्याउन अह्राउँदै दिनको आठ किलो चिनी सकिने जानकारी पनि दिए । डेढ किलो चियापत्ती अनि ३२ लिटर दूध दैनिक खपत हुन्छ उनको व्यवसायमा ।
चियाको बिक्रीसँँगै वसन्तपुरमा प्रवेश गर्ने फेरिएका चरित्रका व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुन पनि सिकिसकेका छन्, गोपाल आचार्यले । कुराकानी चलिरहेको थियो, एक युवक चिया माग्न आइपुगे । गोपालका नियमित ग्राहक रहेछन् । सोधे– ‘एक्लै छौ त ?’ युवकको जवाफ– ‘जोडी छैन ।’ त्यसो भए बिहान नौ बजेतिर आउनु, म मिलाइदिन्छु । ‘कसरी ?’ उनले सहज जवाफ फर्काए– ‘मेरो चियापसलमा बिहानबिहान एक्लै चिया खान आउँछे उ पनि । अनि तिमी पनि एक्लै…†’ केटो मख्ख पर्दै चियाको रकम भुक्तानी गरेर गयो । गोपाल आफ्नै सुरुमा चिया छान्दै बोले– ‘के गर्नु समयअनुसार चल्नै पर्‍यो †’
सिराहा नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवार बिजयी
५ जेठ, २०७९
गोकर्णेश्वरको मेयरमा कांग्रेसका रिसाल विजयी
बझाङका १२ स्थानीय तहकाे मत परिणाम सार्वजनिक
कैलालीको घोडाघोडीकाे प्रमुखमा समाजवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी
पोखरामा ५० हजार मतगणना हुँदा कसको मत कति ?
कैलालीको जोशीपुरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विजयी
२ सय ८३ स्थानीय तहको सेवा बन्द हुने
गणतन्त्र दिवस तीनदिनसम्म मनाउने निर्णय
संसदमा उपस्थित हुन अर्थमन्त्रीलाई सभामुखको निर्देशन
हेटौंडा उपमहानगरमा ११ वटा वडाको मत गणना सम्पन्न
दासढुंगा दुर्घटनाबारे चालक लामाको बयान
ओलीकै वडामा एमाले पराजित
महानगरका दुई वडामा एकीकृत समाजवादी
दुर्घटनामा परेका कांग्रेस सभापतिलाई हेलिकप्टर मार्फत नेपालगन्ज लगियो